သနပ်ခါးမေ: January 2012
By **~ မြတ်ကြည်~** 12:46 AM ကိုရီးယား
ဒီမှာတော့ ကိုရီးယားလို ထမင်းလိပ်ကို ကင်မ်ဘတ်ပ် လို့ ခေါ်ကြပါတယ်။ (ကင်မ် = ရေညှိ၊ ဘတ်ပ် = ထမင်း) ဂျပန်ထမင်းလိပ်ကျတော့ ဆူရှီပေါ့။ ဂျပန်လို မသိတော့၊ မပြောပြတတ်ဘူး။ ဟီးဟီး
ကိုရီးယားလိုလည်း ကြွားပြောရရင် သေစာရှင်စာပဲ တတ်တာပါ။
ဒီနေ့တော့ ဂျာနယ်တွေ မိတ္တူ သွားကူးရင်း၊ တခါမှမဝင်ဖူးတဲ့ တော့ပူကီ အဓိကရောင်းတဲ့ ဆိုင်လေးဆီ ခြေဦးလှည့်မိပါတယ်။
အထဲရောက်တော့ ဘာစိတ်ကူးပေါက်သွားလည်း မသိ။ တော့ပူကီမစားတော့ပဲ ကင်မ်ဘတ်ပ် မှာလိုက်ရော။
အချဉ်ကို ဒီလိုဘူးလေးနဲ့ လာချထားပါတယ်။ အရသာက မက်မန်းပေါင်းလိုပဲ။ အစ်မတစ်ယောက် မြန်မာပြည်လွမ်းလို့ဆိုပြီး အဲဒီ အချဉ်တွေကို ဒီတိုင်းထိုင်စားတာ။
ကင်မ်ဘတ်ပ်ကို ငါးအသားပြား ဟင်းချိုနဲ့ အတူလာချပါတယ်။ ဒါနဲ့ သိသလောက် လျှာရှည်ရရင် ကိုရီးယားနဲ့ တရုတ်နဲ့ စားသောက်ရင် အသုံးပြုတဲ့ တူ (chopstick) အရွယ်ချင်း မတူကြဘူးရှင့်။ တရုတ်တူက ပိုရှည်တယ်။ နောက်ပြီး ကိုရီးယားက ထမင်းကို ဇွန်းနဲ့ပဲစားတယ်။ တူမသုံးဘူး။
အထဲမှာ ကြက်ဥချောင်း၊ ဂဏန်းသား၊ တူးနား မရိုးနေ့စ်၊ ကြက်ဥခေါက်ကြော်၊ ကင်မ်ချီနှစ်မျိုး (ခုန အဝါရောင်လေးနဲ့ အညိုရောင် အတုံးရှည်လေးတွေ တုံးထားတာရယ်)၊ မုန်လာဥနီ၊ အနံ့ပြင်းပြင်းနဲ့ ကင်နီဆိုတဲ့ အရွက်တမျိုးရယ်ပါပါတယ်။
စားပြီးသောက်ပြီး ပြန်ထွက်မယ်ဆိုတော့ နှင်းတွေကျလာပါလေရော။ ပျော်တယ်ဟေ့၊ ပျော်တယ်ဟေ့၊ နှင်းကျတိုင်းပျော်တယ်။ အပြန်လမ်းမှာ ကိုယ့်ပုံကိုယ် နှင်းထဲမှာ မျက်စိနောက်လောက်အောင် ပဲပေးပြီး ရိုက်နေတာ။
ဒါနဲ့ မြတ်ကြည် facebook ကို ဒီကနေ့က စလို့ခဏ သံယောဇဉ်ဖြတ်ထားပါမယ်။ စာလုပ်လိုက်၊ ဖဘ သုံးလိုက်ဖြစ်နေလို့ ခရီးမတွင်ဘူး။ စာမေးပွဲပြီးမှ ပြန်သုံးမယ်လို့..
Aab ဘလော့ဂါ မောင်နှမတွေ ကို အစဉ်အမြဲသတိရလျက်-
By **~ မြတ်ကြည်~** 4:28 PM တိုတိုထွာတွာမှတ်စရာ
မီးပူတိုက်ပြီးသား အကျီတွေ မကြေစေဖို့ တစ်သျှူးစကို အဝတ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ကြားမှာ ခံပြီး သိမ်းကြည့်ပါ
အသုံးများလာတဲ့အခါ ဆွဲရခက်တဲ့ ဇစ်အတွက် ဖယောင်းတိုင်ကို အသွားမှာတိုက်ပေးနိုင်ပါတယ်။
သားရေ ဖိနပ် အရောင်မထွက်တော့ရင် ပထမ အဝတ်စိုတစ်ခုနဲ့ပွတ်၊ ပြီးရင် ဟင်းရွက်ဆီ တစ်စက်လောက်ချပြီး လိုက်သုတ်လိုက်ပါ။ အသစ်အတိုင်း ပြန် တောက်ပြောင်လာပါလိမ့်မယ်။
ငွေနဲ့လုပ်ထားတဲ့ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေ မြေဖြူတောင့်ကို အဝတ်နဲ့ပတ်ပြီးအတူသိမ်းထားရင် အစိုဓာတ်ကိုစုတ်ပေးတာကြောင့် အရောင်မှိန်သွားခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။
မီးပူတိုက်ရခက်တဲ့ ပိုး၊ rayonလို အသားတွေ အတွက် မီးပူဘုတ်ပြားပေါ် ခဲပတ်စက္ကူခံပြီး ရေဆွတ် တိုက်ရင် အဆင်ပြေသွားမှာပါ။ ရေစိုနေတဲ့ ခဲပတ်စက္ကူမှ အပူက တွန့်ကြေနေတာတွေကို အချိန်တိုအတွင်းမှာ ဖြန့်ပေးပါတယ်။
အဖြူရောင်ရှိတဲ့ အကျီတွေမှာ ချွေးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အစွန်းအထင်းတွေမရှိစေဖို့ မီးပူထိုးပြီးတဲ့အခါ လည်ကုတ်နဲ့၊ ချိုင်းနေရာမှာ powder ဖြူးထားပါ။ ချွေး၊ ချည်သားထဲသို့ စိမ့်မဝင်အောင် ကာကွယ်ပေးပါမယ်။
အတိုအထွာလေးတွေကို စုစည်းတင်ပြထားတဲ့ www.realsimple.com မှ ဖော်ပြပါတယ်ရှင်။
စာဖတ်သူများအားလုံး အတွက် သာယာပျော်ရွှင်ဖွယ်နေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင်။
By **~ မြတ်ကြည်~** 8:23 PM Website လမ်းညွှန်
စာမရေးဖြစ်လို့ စာဖတ်သူတွေ ကြည့်လို့ကောင်းမယ့် animation ဇာတ်ကားလေးညွှန်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
Coraline ဆိုတဲ့ကောင်မလေးနဲ့ သူမမိသားစုဟာ ရှေးအိမ်ကြီးတစ်လုံးကို ပြောင်းရွှေ့လာကြပါတယ်။ အိမ်ရဲ့ အခန်းတစ်ခန်းမှာ တံခါးပေါက်လေးတစ်ခုကို တွေ့ဝင်သွားတဲ့အခါ တံခါးနောက်ကွယ်မှာရှိတဲ့ အရာတွေဟာ သူမအိမ်၊ ဝန်းကျင်၊ အပြင်အဆင်နဲ့ တထေရာတည်းပါပဲ။ မတူတာက အပြင်မှာလို အလုပ်တွေရှုပ်၊ သူ့ကို ဂရုမစိုက်တဲ့ မိဘတွေမဟုတ်ပဲ စားကောင်းသောက်ဖွယ်တွေကို အမြဲပြင်ဆင်၊ အရိပ်တကြည့်ကြည့် ဂရုစိုက်တတ်တဲ့ The other Mom & Dad လို့ခေါ်တဲ့ မိဘနှစ်ပါး။ အဲဒီနေရာလေးဟာသူမကို ပျော်ရွှင်မှုတွေ အမြဲပေးနိုင်မလား? ဒီဇာတ်ကားလေးက ရသနဲ့ ဘဝကို ချိန်ထိုးပေးထားပါတယ်။ :)
ဒီဇာတ်ကားလေးကို ညွှန်းပေးတဲ့ အစ်မရို့စ်ကို အထူးကျေးဇူးပါ။
http://www.megaupload.com/?d=DPZPENMW (601 MB)
By **~ မြတ်ကြည်~** 2:14 AM Tag posts, လက်​သည်း ( nail art )
ဒီလို ဆောင်းရာသီလေးဆို စတော်ဘယ်ရီ လေးတွေ ရနေပြီ။
ဒီရာသီနဲ့အကိုက် စတော်ဘယ်ရီ ပုံစံ လက်သည်းလေးကို လုပ်ကြည့်ရအောင်နော်။
အမြင်လည်းလှ လုပ်ရတာလည်း အရမ်းလွယ်ပါတယ်။
လိုအပ်တာက လက်သည်း ဆိုးဆေး အနီ၊ အနက်ရောင်၊ တိပ် နဲ့ သွားကြားထိုးတံ တစ်ချောင်း ပါ။
အရင်ဆုံး ဘေ့စ် ကုတ် ဆိုးပါ။ ပြီးရင် အောက်ခံကို အနီရောင်ဆိုးပြီး အခြောက်ခံပါတယ်။
လက်သည်းထိပ်ကို နေရာ အနည်းငယ်ချန်ပြီး တိပ်ကို အခုလိုကပ်ပါ။ ( ဘယ်တိပ်ဖြစ်ဖြစ်ရပါတယ်)
လွတ်နေတဲ့ လက်သည်းထိပ်မှာ အမည်းရောင်ကို ဆိုးပါ။
တိပ်လေးကို ခွါလိုက်ရင် ဒီလို ပုံလေးရပါမယ်။
သွားကြားထိုးတံကို လက်သည်း ဆိုးဆေး အနက်မှာ ၁၀ စက္ကန့်လောက်နှစ်၊ ပြီးရင် အစက်လေးတွေလိုက်ချပါ
( ကြာကြာနှစ်လေ၊ အလုံးလေးတွေရဲ့ အရွယ်ကြီးလေ ပါပဲ)
လွယ်ကူရိုးရှင်းပြီး၊ ဒီဇိုင်းလှတဲ့ strawberry ပုံလက်သည်းလေးရပါပြီရှင်။ :)
အလှတွေ ပိုနိုင်ကြပါစေ။ ^^
မိစံ နဲ့မောင်တစ်လုံးရေ၊ အထူးတလည် တက်ဂ်လို့ ကျေးဇူးပါ။ ဒီမှာက ဘာမှထွေထွေထူးထူးရှိဘူး။ ^_^
ဟိုစမ်း၊ ဒီစမ်း၊ alarm ကိုပိတ်၊ စောင်ပြန်ခြုံ
ကော်ဖီသောက်ရင် ရင်တုန်တတ်၍ ရှောင်သည်။
ဟင်း ကောင်းကောင်း မချက်တတ်သေးပါလား << sigh >>
အုန်း ခနဲ ထိုင်ခုံပေါ်ထိုင်ချလိုက်တယ်။
ကာဖီ ?? <<နိုး>> ချောကလက်ပူပူလေး ?? << ဂွတ် >>
စာကြည့်တယ်၊ တန်းအိပ်ပျော်သွားရော :P
ဖုန်း၊ သော့၊ ကတ်ထည့်ထားတဲ့ ပိုက်ပိုက်
ပါးပါး၊ မာမား၊ မြတ်ကြည် အဒေါ်( ငယ်ငယ်ကတည်းက သူများအပေါ် အမှားတစ်ခုလုပ်မိတိုင်း၊ အဒေါ့်ကိုပြောပြတတ်သည်)
ဖုန်းတင်လိုက်ရင် တေးသံလေးတွေ မြည်တာ၊ ဘာခေါ်လည်းတော့မသိဘူး။ (အထဲကသံချောင်းလေးတွေမြင်နေရတယ်) အခုမရှိတော့ပါ။
♥ ကိုယ့်ပတ်သက်ဖူးတဲ့သူတွေထဲမှာကိုယ့်ကို နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးနိုင်ဆုံးသူ
ချစ်ချစ် (မင်းလောက်ကိုယ့်အပေါ် ဘယ်သူမှမကောင်းဘူး)
By **~ မြတ်ကြည်~** 12:31 AM မျက်​နှာ အလှပြင်​ makeup
ဒီနည်းလေးကို စ သိတာ၊ ဘွဲ့ရမိတ်ကပ်ပြင်တော့၊ ပြင်ပေးတဲ့သူက မြတ်ကြည်ကို သင်ပေးတာ။
"ပါးစောင်နှစ်ဖက်ကို ကပ်နေအောင် စုတ်လိုက်ရင် ပါးရိုးအောက်က ခွက်နေတဲ့ နေရာ ကို ဒီလို ခြယ်ရတယ်။ မှတ်ထား။ အဲဒါ ဖော်မြူလာအသစ်။" လက်ညှိုး တထိုးထိုးနဲ့...
ပါးတွေ အဲလို လိုက်စုပြီး လိုက်မှတ်ကြတာပေါ့။ မလှချင်ပုံများ ...
တကယ်လည်း အဆင်ပြေတယ်။ အဲလိုခြယ်ရင် အပိုအလိုမရှိဘူး။ :)
တနေ့က အစ်မဒိုးကန် ပြောတာနဲ့၊ ဟိုလျှောက်ရှာ၊ ဒီလျှောက်ရှာလုပ်ရင်းနဲ့ ဒီနည်းလေးကို http://www.realsimple.com မှာ ပြန် တွေ့လို့ပြန်လည်ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။
ဆောင်းပါးလေးမှာတော့ ဒီလို ရေးသားထားပါတယ်။
Use the DivaSuck in your cheeks and apply color to your cheekbones, working from the temples in. “Just follow the lines of your bones—it’s foolproof,” says Laura Geller, the president of Laura Geller Makeup, in New York City. After applying, look straight into the mirror to make sure that you’ve put the same amount of color on each side.
By **~ မြတ်ကြည်~** 12:56 AM မြတ်ကြည်၏ စုံစီနဖာ
နှစ်သစ်ကူး အခါသာမယမှာ မင်္ဂလာယူပုံက သူငယ်ချင်းရောင်းရင်းတွေနဲ့အတူ ရေခဲပြင်စကိတ်သွားစီးတာ မေးကွဲသွားတယ်။
ဒါနဲ့တော့ မတော်သေးဘူး။" အနိုင်မခံ၊ အရှုံးမပေး၊ တတ်အောင် သင် မဟဲ့ " ဆိုပြီး ပလာစတာကပ်ပြီး ထပ်စီးတာ ကျွမ်းတွေပစ်၊ ဒိုက်တွေထိုး။ ပါလာတဲ့သူတွေက " မြတ်ကြည်လေးရေ၊ တော်သင့်ပြီ၊ ကြည့်တဲ့သူတွေတောင် တော်တော်နာနေပြီ။" ကိုယ့်ကြည့်ပြီး ဓာတ်တွေကျ။ စီးနေတဲ့သူထဲမှာ တဗိုင်းဗိုင်းလဲ နေတာဆိုလို့ ကိုယ်တစ်ယောက်ပဲရှိတယ်။
ခေါင်းမာချက်က ညစာစားပြီး မှ ကျောင်းဆေးရုံမှာ ဝင်ပြတယ်။ မေးစေ့ကို (၆) ချက် ချုပ်လိုက်ရတယ်။ နှစ်သစ်မှာ ပိုက်ပိုက်တွေ ပါသွားပါလေရောလား ...
( reconstructive surgeon မို့လို့ ဈေးပိုယူတယ်ထင်ပါ့)
ပြီးတော့ ခွင့်လည်းမရဘူး။ (ဘယ်ရမလဲ ကိုယ့်ဟာကို ရွပြီးဖြစ်တာကိုး။) အခုထိ အထိုင်အထ၊ အကွေးအဆန့်မှာ တကျွတ်ကျွတ် အော်နေရတုန်း။
၆ရက်နေ့ ချုပ်ရိုးဖြည်မှ အမာရွတ်ထင်မထင် သိရမှာ။ ထင်လို့ကတော့ တရားစွဲပစ်လိုက်မယ်။ မြန်မာပြည်က လူနာတွေကို အားကျလို့ :P
လွတ်လပ်ရေးနေ့ဒို့မမေ့ မှာတော့၊ ဘာမှမလုပ်ရဲတော့ဘူး။ အိမ်ကိုတော့ နောက်တစ်လလောက်မှ ပြောတော့မယ်။ ပြောလိုက်ရင် စိတ်ပူနေကြမှာ။ :(
အခုလက ဌာနအသစ်မှာ။ တနေကုန် မတ်တပ်ပဲ။ ခါးနာတယ် but တက်ကြွနေတာ :D နောက်တစ်ပတ်ကျရင် ဆရာတွေက laproscopic gastrectomy case တွေမှာ assist စ ဝင်လုပ်ခွင့်ပေးလို့ စာတွေပြန်ဖတ်နေပါတယ်။ ကိုယ့်နိုင်ငံတုန်းက အဲဒါတွေနဲ့အလှမ်းဝေးတယ်။ Laproscopy နဲ့ပတ်သက်လို့ sterilization ကလွဲရင် တခါမှ assist မဝင်ဖူးဘူး။ မြန်မာပြည်က ဆရာတွေကိုစော်ကားတာမဟုတ်ပါဘူး။ ပစ္စည်းရှားလို့ အသစ်တွေကို ပေးမလုပ်ခိုင်းတာလို့ပဲ မြင်ပါတယ်။
မတ်လကျရင်တော့ comprehensive exam ဆိုတာရှိတယ်။ အဲဒါအောင်မှ ဘွဲ့ပေးမှာ။ မအောင်ရင် လက်ဗလာနဲ့ပြန်လာရမှာ။ အခုတည်းက လန့်နေတယ်။
နှစ်သစ်မှာ ကံကောင်းခြင်းတွေရောက်ဖို့ မျှော်လင့်လျက် -